jsoup: I-Java HTML Scrapper - Ukuhlaziywa kweSomalt
i-jsoup yindawo yokugcina iJava eyenza i-HTML. Ixhotyiswe nge-API esebenzayo nefanelekileyo eqokelela, ihlalutya, kwaye ilawula idatha, isebenzisa i-DOM efunekayo, i-CSS, kunye neendlela ezifana ne-jquery-like.
kunye nabaqulunqi be-jsoup kunye nabaqulunqi bewebhu bangahlakulela amaxwebhu avela kwiifayile zangaphandle zewebhu ngaphandle kokuphazamisa isakhiwo seefayili zomthombo. Emva kokubuyisela iifayile, abasebenzisi be-jsoup banokuphinda bahlaziywe okanye baphinde bahlaziye zonke izixhobo zesakhiwo okanye izakhi zezinto ngokufaka okanye ukuguqula izinto okanye umxholo okanye zombini.
Isixhobo sakhiwe ngobuchule obukhulu ukubonelela nge-flexible ne-standard standard programming interface kubasebenzisi phakathi kweentlobo ezahlukeneyo ze-intanethi kunye nezicelo. Oku kunika umsebenzisi ukufikelela okufunekayo ukutshintsha, ukucima, okanye ukongeza izixhobo kwiimvelaphi zazo.
i-jsoup inokuthi ihlaziye kwaye idibanise idatha kwiincinci ezincinci ukuguqulela lula kwezinye iifom. Idatha yegalelo ichithwe ngendlela ye-algorithmic progression eyenziwe yikhowudi yemigaqo eyakhelwe ekuqokeleleni okanye kwimithi yokufumana. Yakhelwe ukuqonda nokudibanisa izixhobo ze-HTML ezinokuthi zikwazi ukufumana iifayile eziphathekayo kunye nokuguquguquka ngokuxhomekeke kwisakhiwo sokukhonkxa. Kwenza njani oku? Iyakhweba kwaye ihlwitha yonke iphepha lewebhu ukwenzela ukufikelela kunye nephethini ukuthabatha idatha. Ukuba idatha yokufumana iyakwazi ukuqhubeka:
Ukuqhafaza idatha ukusuka kwinqanaba eliphantsi kwesakhiwo, ukuhlalutya zonke iinkcukacha zedatha, ngokusebenzisa iziqulatho eziphakathi kwiphakamiso yesigxina okanye umthi wokufumana.
isisombululo esiphumeleleyo esisebenza ngokuphindaphindiweyo kwemisebenzi emininzi kwimizuzwana yokuhlukanisa ngenxa yokucwangciswa kwayo. Inkqubo ibandakanya ukulandelelana kwezigaba ezintathu ezisisiseko ukusuka:
1. Ukwahlukana kwabalandelayo abalinganiswa kunye nedatha kwiipakethi ezincinane ezilula, kunye nokuhlaziywa kwezi bitshana zabalinganiswa kunye nedatha yokudala.
2. Ukutolika okungafundwa kwaye kuhlanganiswe ulwimi lomatshini olukwazi ukubeka izinto zeenkcukacha ngendlela ekhethwa ngayo kwaye ingasetyenziselwa ukuvelisa
3. Amazwi e-elektroniki enza iinqununu zolwazi oluyimfuneko yokucwangciswa, ukubaluleka kunye nokufaneleka kumsebenzisi.
jsoup iyahambelana kunye kwaye iyakwazi ukuqhuba isakhiwo esikhulu seempendulo ze-HTML, isikhokelo solimi, iinkqubo kunye nesitayela somqulu kubandakanywa neemfuno ze-WhatWG HTML5. Bayakwazi ukulungisa izakhiwo ze-HTML kwiMpawu yoMqulu ofanayo kunye nezicelo zesofthiwe zewebhu ezisetyenziselwa ukukhipha, ukuhamba nokubonisa iinkcukacha kunye nezixhobo zolwazi kwiWebhu Yehlabathi.
ulandele i-HTML kwi-URL, ifayile okanye ngentambo
ukukhupha idatha, usebenzisa i-DOM traversal okanye i-CSS ekhethiweyo
ukuphucula izixhobo ze-HTML, iimpawu, kunye neetekisi
zisusa umxholo othunyelwe ngumsebenzisi ngokubhekiselele kuluhlu olugciniweyo olukhuselekileyo, ukukhusela ukuhlaselwa kwe-XSS
( 45) Ukuhambisa i-HTML efanelekileyo
Isofthiwe yakhelwe ukulungisa zonke iintlobo ze-HTML kungakhathaliseki ukucwangciswa: ukususela kwangaphambili kwaye kuqinisekisile, kwi-tag-soup engavumelekanga: i-jsoup izakudala isakhiwo esifanelekileyo sesakhiwo.